एक वर्षमा १२ लाख विद्यार्थी गायब, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
एक वर्षमा १२ लाख विद्यार्थी गायब
डिसी नेपाल , २३ माघ २०७५
काठमाडौं। शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि तय गरिएको विद्यार्थी संख्यामा झन्डै १२ लाख विद्यार्थी कम देखिएको छ। सरकारले तयार गरेको फ्ल्यास रिपोर्टका आधारमा शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि तय गरेको विद्यार्थी संख्यामा झन्डै १२ लाख विद्यार्थी कम देखिएको छ।
शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रले हचुवाको भरमा तथ्याङ्क निकाल्ने गरेको देखिएको छ। फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार तत्कालीन शिक्षा विभागले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई करिब ६८ लाख विद्यार्थीलाई पुग्ने पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो। केन्द्रका अनुसार गत वर्ष ६८ लाख ७ हजार ५ सय ५२ विद्यार्थी स्कुलमा उपस्थित थिए।
तर शैक्षिक सत्र २०७५ मा यो संख्यामा १२ लाखले घटेर ५६ लाखको हाराहारीमा पुगेको छ। केन्द्रले दिएको तथ्याङ्कअनुसार शैक्षिक सत्र २०७६ का लागि ५६ लाख ९ हजार ५ सय ९३ विद्यार्थी रहने जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ११ लाख ९७ हजार ८ सय ५९ विद्यार्थी कम रहेका छन्।
कहाँ हराए गत वर्ष भर्ना भएका करिब १२ लाख विद्यार्थीरु यो विषयमा केन्द्रले कुनै उत्तर दिन सकेको छैन। केन्द्रका शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखाका निर्देशक गोविन्दप्रसाद शर्माले विद्यार्थीको एकिन तथ्याङ्क निकाल्दा केही घटेको हुनसक्ने बताए। उनले भने– ‘सबै विद्यार्थीको एकिन तथ्याङ्क संकलन गर्न तीनपुस्ते फाराम भरेका कारण केही नक्कली विद्यार्थीको संख्या घटेको हुनसक्छ।’
बढी विद्यार्थी देखाएर करोडौं रुपियाँ अपचलन हुने गरेको आशंका बढेपछि केन्द्रले आगामी वर्षका लागि विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण तयार गरी एकिन विद्यार्थीको तथ्याङ्क निकालेको हो। केन्द्रले अहिले विद्यार्थीको फाराम भर्दा विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण भर्ने गरेको छ। तथ्याङ्क संकलन गर्दा केही विद्यार्थी कम भएको हुनसक्ने केन्द्रको अड्कल छ।
नाम नामेसीसहितको विवरण तयार गर्दा केही विद्यार्थीको संख्या घट्नु स्वाभाविक भए पनि १२ लाख विद्यार्थी हराउनुमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ। केन्द्रका प्रवक्ता दीपक शर्माले केही वर्षदेखि विद्यार्थीको संख्या घट्नु स्वाभाविक भए पनि यति धेरै संख्यामा विद्यार्थी घट्नु गम्भीर विषय भएको बताए। उनले अहिले विद्यार्थीको जन्ममितिदेखि घरको सम्पूर्ण विवरणबारे जानकारी हुनेगरी एकिन तथ्याङ्क राखेको कारण गलत नियतले भर्ना गरिएको भनिएका विद्यार्थीको संख्या घटेको हुनसक्ने बताए।
केही सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको टाउको गनेर पुस्तक दिने भएपछि भर्ना नै नभएका विद्यार्थीको नाम लेखेर केन्द्रमा पठाएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार पढ्दै नपढेका विद्यार्थीको नाम पठाएर किताबको रकम दुरुपयोग गर्ने प्रधानाध्यापकको विषयमा छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। निर्देशक शर्माले भन्नुभयो– ‘हालसम्म ३५ हजार ६ सय ३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये हालसम्म ३२ हजार विद्यालयले मात्रै विद्यार्थीको नाम नामेसी पठाएका कारण विद्यार्थीको संख्या घटेको हो।’
तर पुस्तक वितरण गर्ने समयमा कति विद्यार्थी छन् सबै एकिन हुने उहाँको भनाइ थियो। केन्द्रले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा जनक शिक्षाले पुस्तक छपाइ शुरू गरिसकेको छ। बढी विद्यार्थी देखाएर करोडौं रुपियाँ अपचलन हुने गरेको आशंका बढेपछि केन्द्रले आगामी वर्षका लागि विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण तयार गरी एकिन विद्यार्थीको तथ्याङ्क निकालेको हो।
निजी पुस्तक प्रकाशकका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले करिब १२ लाख विद्यार्थी गायब भएको बताए।
गत वर्षको तुलनामा यति धेरै विद्यार्थी घट्नु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले भने– ‘यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारले छानबिन गर्नुपर्छ।’
केन्द्रले निजी प्रकाशकलाई पठाएको तथ्याङ्कभन्दा जनकसँग भएको तथ्याङ्क फरक देखिएको छ। केन्द्रका प्रवक्ता शर्माले विद्यार्थी घटेको हो वा होइन भन्ने विषयमा थप अध्ययन गरिने बताए। नेपाल समचारपत्र दैनिक